प्रतिविम्ब | मझेरी डट कम
kbs — Mon, 10/13/2008 - 12:06
विदेशी दातृसस्थाले आवश्यक रकम संगै दानमा दिएको ऐना आएदेखि त्यस कार्यालयका कर्मचारीहरु असहज महसुस गर्न थाले । कार्यालय भवनको मूल ढोकाबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै देखिने ठूलो पूर्णकदको ऐनाले हरेकलाई आकर्षित गर्दथ्यो । सुन्दर कलात्मक बुट्टाको फ्रेम भएको ऐना आफैमा पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्थ्यो । ऐना छेउ भएर जति नै पटक ओहोर-दोहोर गर्दा पनि नहेरुँ भन्दा-भन्दै ऐना नहेरी मन मान्दैनथ्यो ।
केही दिन यता भने त्यस कार्यालयका कर्मचारीहरु एका-एक आफैंसँग भयभीत हुन थाले । आफ्नै प्रतिविम्ब कार्यालयको ऐनामा देखेर डराउँदथे ।
आफैलाई भ्रम भएको हो कि भनेर ऐना अगाडि पुगेर केश सम्याए कपडा ठिक-ठाक मिलाए उही आकृतिको आभास हुनथाल्यो । भ्रष्ट कमिशनखोर बेईमान कामचोर चाकरीबाज चम्चा चुक्लीबाज?आदिमा आफ्नो विम्ब रुपान्तरण भएको आभास हुँदा भयका साथै घोर आश्चर्य पनि लाग्यो । त्यो भय अब आफूबीच मात्र सिमित रहेन । यस्तै पीडाको अनुभूति आफूलाई जस्तै अरु सहकर्मीलाई पनि भएको थाहा पाएपछि लुकाई रहनु पर्ने विषय रहेन त्यो । यो कुरा अब हाकिम कहाँ पुग्यो । हाकिम त झन् क्रोनिक भै सकेका रहेछन् । आफू सहित कार्यालयका कर्मचारीहरु एकै खालको भयले ग्रस्त भएको थाहा पाउँदा हाकिम झन् चिन्तित भए ।
त्यस पछि कार्यालयमा पीडित कर्मचारीहरुको गोप्य बैठक बस्यो । सबैले ऐनाबाट भयभित भएको कुरा खुलेरै व्यक्त गरे । कर्मचारीहरुले त्यस ऐनालाई कार्यालयबाट हटाउनै पर्ने राय व्यक्त गरे । तर सजिलै त्यस ऐनालाई हटाई हाल्न नसकिने कुरा बैठकमा निस्कियो । ?दाताले प्रदान गरेको ऐना तिनीहरुको अनुमति बेगर हटाउन मिल्दैन? -हाकिमले भने । पाका उमेरका एक कर्मचारीले थपे- ?यस ऐनामा अवश्य कुनै दैवी शक्ति छ जस्तो लाग्दछ जस्ताको तस्तै हाम्रो प्रतिविम्व उतार्दछ । त्यसै हटाउँदा कुनै विपत्ति आउन सकछ ।? एक प्राविधिक फाँटका कर्मचारीले व्याख्या गरे- ?यस ऐनामा कुनै प्रविधि जोडिएको हुनुपर्दछ । भिडियो क्यामराले खिचेर देखाए जस्तै लाग्दछ । हटाउँने हुँदा निकै विचार पुर्याउनु पर्दछ ।? भय त्रास र शंका-उपशंकाकाबीच आखिरमा बैठक कुनै निर्णय बेगर सकियो । सानो धक्काबाट क्षणभरमै झर्याम्-झुरुम् हुने काँचको निर्जिव ऐनाबाट यति साह्रो भयभित भएका थिए ती कर्मचारीहरु ।
ऐना हटाइँदै छ भन्ने कुराको चर्चा कार्यालयमा चल्यो । त्यो कुरा सुनेर कार्यालयका सिधा-साधा र अतिरिक्त आम्दानी हात नपार्ने तथा पियन-चौकिदार लगायतका कर्मचारीहरु पनि खुसी देखिए । किनभने उनीहरु चांिहं अर्के पीडाबाट दुखी बनेका थिए । आफ्नो गरिबी कार्यालयको पूर्णकद देखिने ऐनामा हेर्दा मात्र थाहा पाए । कार्यालयको ऐनाले प्रत्येक पटक आफ्नो गरिबीलाई गिज्याएको जस्तो लाग्नथाल्यो ।
सावधान तपाईंहरु भ्रष्टचार विहीन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ !
-भ्रष्टचार सामाजिक अपराध हो; भ्रष्टचारीलाई दण्डित गरौ !
-घुस खाने-खुवाउने दुवै दोषी हुन् ; दुवै दण्डका भागी हुन्छन् !
-कमिसन र घुस एकै हुन् ; लिने-दिने उत्तिकै दण्डित हुन्छन् !
-नातावाद कृपावाद चाकरी चुक्ली आदि गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरौं !
??आदि लेखिएको ऐना भन्दा पनि ठूलॊ सूचना पाटी कार्यालयमा ल्याइयो । र त्यो सूचना पाटी ऐनालाई छोप्ने गरि ठिक अगाडि राखियो । अनि त्यो बेइमान ऐनाको आतङ्कबाट मुक्ति पाइयो भन्दै पूर्ववत् कार्यमा लिप्त भए कर्मचारीहरु ।
त्यसको लगत्तै सूचना पाटी ल्याउँदा मिलाइएको कमिशन रकमले हाकिम र केही कर्मचारीहरु मात्र मिलेर खुशीयालीमा भोज खाए । त्यसपछि भोज नखाएका बाँकि कर्मचारीहरुलाई भने अपच भयो ।
तीन हाइकू (साकुरा फूल)